Mayelana NATHI - Huaian ASN Medical technology Co., Ltd.
IHuaian ASN Medical technology Co., Ltd.
singumkhiqizi omusha ogxile ekwenzeni ucwaningo nentuthuko yemikhiqizo, ukukhiqiza nokuthengisa. I-Huaian ASN Medical Technology Co., Ltd. yasungulwa ngonyaka ka-2012. Kusukela yasungulwa, ibisebenza ngokubambisana namanyuvesi kanye namakolishi ukwenza impumelelo kwezobuchwepheshe emkhakheni wepulasitiki wamathambo ngenhlanganisela esondele yokukhiqiza, ukutadisha kanye nocwaningo.
Ngemuva kweminyaka yemizamo engapheli, i-Huaian ASN Medical Technology Co, Ltd. manje seyibe ngumkhiqizi wokuqala we-Orthopedic Casting tape nama-splints ezweni. Sihlala sinamathela kunqubomgomo yekhwalithi yokuklama ngokucophelela, ukukhiqizwa ngokucophelela, insizakalo enomdlandla, ukulwela isigaba sokuqala, ukukhuthaza intuthuko ngobuchwepheshe. Sihlala sinamathela kwifilosofi yebhizinisi yobuqotho nokwethembana, futhi siphumelela phakathi komgcini neklayenti. Sibheka ikhwalithi njengokuphila kwebhizinisi, futhi sibuyisela umphakathi ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamanani aphansi.Buyela kumsebenzisi!
Le nkampani inamalungelo obunikazi ayi-15 futhi izwakalisa amabhizinisi esizwe anobuchwepheshe obuphezulu.
Sinesitifiketi sohlelo lwe-ISO 13485, isitifiketi se-EU CE, isitifiketi se-US FDA futhi sibamba iqhaza emibukisweni eminingi emikhulu yokuhweba ekhaya nakwamanye amazwe minyaka yonke.
Inkampani yethu ikakhulukazi ikhiqiza imikhiqizo enelungelo lobunikazi efana ne-Orthopedic Casting tape, amateyipu okulungisa, namateyipu wokuvikela wepayipi ye-petroleum. Singenise imishini nezinto zokwakha futhi saqhubeka senza imikhiqizo emisha. Imikhiqizo yale nkampani ithunyelwa emazweni angaphezu kwama-20 kufaka phakathi i-United States, Canada, Germany, Britain, Italy, Egypt kanye ne-India. Emgwaqweni wentuthuko yesikhathi esizayo, inkampani inamathela enkambisweni yokuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo ehamba phambili, ukwenza imikhiqizo yabo nezinsizakalo zabo kuphumelele, nokubuyisela amakhasimende amasha namadala.
Sihlanganyele emibukisweni eminingi yamazwe omhlaba. Ungahlola imininingwane yemibukiso esike sabamba iqhaza kuyo ngaphambili.